Nifankafantarana: roa-polo Fanontaniana mba Hanontany ny Ankizivavy iray Ianao Vao Nihaona
Rehefa miezaka ianao mba hiakatra miaraka amin ny fanontaniana mba hanontany ny ankizivavy iray ianao vao nihaona, ny fanaovana ny tsara indrindra tongotra hatrany dia manan-danja mba scoring ny notsiriritiny fatratra ny daty voalohany. Manana voly sy ny tampon’isan’ny ny hanorotoro ny te hahafanta-javatra amin’ny alalan’ny fametrahana ireo roa-polo fanontaniana mahaliana. Izany no lehibe icebreaker fanontaniana satria dia manokatra ny resaka tsy misy ny hanorotoro rehefa ho tonga amin’ny faran’izay ela ny valiny.
Na dia mbola velona misy, na dia tsy nitsidika ny tao ny taona, misy angamba no iray amin’ireo toerana manokana fa izy dia mihazona malala ny azy am-po. Ny karazana toerana nosafidiany dia hilaza ianao be dia be momba na izy mihoatra ny iray introvert na ho extrovert. Inona no fomba tsara kokoa mba hahafantatra ny zazavavy noho mba hanontany azy momba ny toerana tena sakafo? Na inona na inona ny valiny dia, tuck eo an-paosy indray mba hanaisotra taty aoriana rehefa te-mahandro azy amin’ny tantaram-pitiavana sakafo ao an-trano. Ity dia hilaza aminareo ny be dia be ny raha izy no sahisahy karazana na mihoatra ny homebody. Zava-dehibe fa ianareo roa dia mifanaraka rehefa resaka mandeha satria handeha amin’ny fitsangatsanganana zavatra izay mitondra roa akaiky kokoa ny miara-miasa. Ka ny valiny azo ampiharina bebe kokoa na ny zavatra ara-nofo? Raha toa ianao lehilahy iray izay tsy te-handany vola amin’ny zavatra hafahafa, ary izy no misafidy ny akanjo, firavaka, makiazy sy toy ny valiny, dia mety ho tianao ny mandroso eo alohan’ny variana amin’ny zavatra tsy afaka hiatrehana izany. Ny zavatra tianao hatao dia tsara ho famantarana ny karazana tovovavy ny hanorotoro sy izay mitandrina ny manolo-tena amin’ny isan-karazany ny fifandraisana. Ny iray amin’ireo tena saro-pady fanontaniana mba hanontany ny ankizivavy iray ianao vao nihaona ny taona. Nihodidina ny fanontaniana izany dia hanome anao ny marokoroko hevitra ny taona nefa tsy voatery hanontany azy tsotra izao. Tsy miezaka ny handray ny valiny loatra manokana satria ny ankamaroan’ny no mianatra voalohany momba ireo zavatra rehetra mikasika ny endrika ara-batana. Rehefa mahita ny zavatra voalohany nisarika ny maso dia afaka miasa amin’ny fanindriana fa ny endri-javatra. Mety ho zavatra toy lavitra indray toy ny sekoly ambaratonga faharoa na ny zavatra nitranga tamin’ny herinandro lasa. Raha izy no mahay mihomehy ny tenany amin’ny alalan’ny menatra izay hanome anao hevitra tsara ny fomba tsara izy famohana ny olana fa ny fiainana niantoraka taminy. Ny fahafantarana ny zavatra ny hanorotoro mitady mialoha ny daty voalohany dia hanome anao fanazavana mikasika ny fomba fihetsika manodidina azy. Raha izy fotsiny mitady hookup, mandany ora maro ny fandefasana azy mamy andinin-teny sy ny fividianana ny voninkazo dia ho fandaniam-potoana. Nahazo nidina ho any amin’ny nitty gritty izay mitarika ny adala dia hanampy anao tsy ho lasa iray ny biby peeves. Izy mihoatra ny iray anaty trano mafana fo na amin’ny toetra tia? Ianao mandany fotoana be dia be miaraka raha toa ka manomboka ny fiarahana noho izany dia te-hanao antoka fa manana mitovy zavatra tiana. Izany dia mety ho iray mampihetsi-po ny foto-kevitra, fa fantany izy raha mino An’andriamanitra na ny hafa ara-panahy maha-zava-dehibe. Raha ny fifandraisana mivadika lehibe, ianao amin’ny farany ho nampitambatra ny fiainanareo miara sy ny mety ho milalao ny tena zava-dehibe ny anjara toerana amin’ny ho avy. Ny ankamaroan’ny olona manana ny teny na ny hoe fa izy ireo dia miezaka ny hampihatra ny fiainana. Raha ny teny nalaina dia toy izany koa ianao, dia hanana ny tsara ny fahazoana fahafahana miaraka.
Fa ndao hatrehina izany — ianao mitady ny daty io zazavavy io
Midika izany fa ianao dia amin’ny farany ho mahafantatra azy eo amin’ny sehatra ara-batana. Te-hahalala izay mahazo azy handeha toy izay ianao samy afa-po ara-batana.
Isika rehetra efa naratra tao anatin’ny fifandraisana
Zava-dehibe tsy fantatro hoe inona no nampalahelo azy tany aloha, ka tsy manao ireo fahadisoana mitovy. Izany no fomba tsara mba hahitana raha toa ka ray aman-dreniny dia mbola velona nefa tsy mba hanontany ilay fanontaniana tsotra izao. Fifandraisana ara-pianakaviana dia afaka ny ho lohahevitra saro-pady fa ny fahafantarana izay izy no akaiky indrindra hanome anao ny tsara famantarana ny maha-zava-dehibe ny fianakaviana dia ho azy. Tsarovy, miezaka ianao mba hampiaiky volana ity zazavavy ka fantany izay mivadika ny eny dia aoka fantatrao ny zavatra andalana aza.
Tsy misy olona te ho lehilahy sy ny cheesy teny andalana
Mifampitantana, mahafatifaty lahatsoratra, voninkazo sy vatomamy. Mahalala fomba izy no mamaritra ny olon-tiany dia hanome anao an-tsaina ny zavatra tokony hatao mba hahazoana ny fony. Tsy dia ny fomba an-kolaka mba hangataka azy ho avy, izany dia mametraka azy ao amin’ny sezan’ny mpamily rehefa ny mahakasika ny drafitra izay fiokoana ny ankamaroan’ny ankizivavy sy mahazo azy faly mba mivoaka miaraka aminao
← Lehilahy Arabo Fotsy Ny Vehivavy
Hihaona Arabo Tokan-Tena Any Amin'ny Faritra Afovoany Atsinanana Personals Mampiaraka Toerana →